YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, January 05
ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့) မှာ ကျင်းပခဲ့ ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ လက်ထပ် မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/05/20110အကြံပြုခြင်း
အရင် နာမည် မထွက်ဘူးသေး တဲ့ လူ က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ် မှာ ပါ တဲ့။ ။
လာမဲ့ ၃ ရက် ၄ ရက် လောက် ဆို လွှတ်တော် ခေါ်ဘို့ ကြေငြာသံ တွေ ကြားရ တော့ မှာပါ။
ဇန်နဝါရီလ အလယ်လောက် က စပြီး လွှတ်တော် အဆင့်ဆင့် တွေ တပါတ်ပြီး တပါတ်
လုပ်ကြရင်း ဖေဖဝါရီလ ဒုတိယပါတ်လောက် ဆို အစိုးရ အဖွဲ့ အသစ် စာရင်း မြင်ကြရ မှာပါ
လက်ရှိ အစိုးရ အဖွဲ့ထဲ က လူတွေ ၊ ကိုယ် က ဘယ် ဘဝ ဘယ်အခြေ ရောက်ကြ ဦးမယ်
ဆိုတာ ဘယ်သူ က မှ သေချာ မသိရသေး ပါဘူး တဲ့ ခင် ဗျ ၊ တလောက ကာကွယ်ရေး
ဦးစီးချုပ် နေရာ အတွက် ကောလဟလ ထွက် ခဲ့တာ တောင် အခု မဟုတ်တော့ ပြန်ဘူး တဲ့
ခင်ဗျ ၊ အရင် နာမည် မထွက်ဘူးသေး တဲ့ လူ က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ် မှာ ပါ တဲ့ ၊
နောက် အစိုးရ က ဗဟို အစိုးရ နဲ့ ဒေသကြီး အလိုက်၊ ပြည်နယ် အလိုက် အစိုးရ တွေ
ဖြစ်လာ မှာ ဆို တော့ ၊ အခု လက် ရှိ လူ တွေ ကို ၊ နေရာ ဒေသ အလိုက် ကျစ်ကျစ်
လစ်လစ် ဖြစ်အောင် နေရာ ဖြန့်ပြီး တာဝန် ပေးလိမ့်မယ် ထင် ပါတယ်။ ဘယ်သူ က
ဘယ် အသင်း ၊ ဘယ် နေရာ ၊ ဘယ် နိုင်ငံရေး နေရာ မှာ မှာ ကစားရမယ် ဆိုတာ က တော့
အခု လက်ရှိ နည်းပြချုပ်မှူးကြီး ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် သဘော တခု ဘဲ ဖြစ် ပါလိမ့် မယ် ။
အခုတော့ နေပြည်တော် မှာ ရုံးတွေ မှာ လူတွေ က ရုတ်ရုတ် သဲသဲ ပါ ။ လက် ရှိ ဝန်ကြီး
ဌာန တွေ က အမှုထမ်းတွေ ကို နောင် လွှတ်တော် အသစ် နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ရုံးတွေ ကို
ပြောင်း ဘို့ ရွှေ့ ဘို့ ၊ လူအင်အား ဖွဲ့စည်းတာတို့ ၊ ဌာနအသစ် တွေ ဖွဲ့ တာ တို့ နဲ့
အခု ပြီးခဲ့ တဲ့ ရုံးပိတ်ရက် ၊ စနေ တနင်္ဂနွေ ၊ လွပ်လပ်ရေး ၊ ကရင် နှစ်ကူး တွေ မှာ
ဝန်ထမ်းတွေ အခု ရန်ကုန် ကို တောင် ပြန်လာ နိုင် ကြ တာ မတွေ့ ရ ပါဘူး။
ရန်ကုန် အိမ်တွေ က နေ နေပြည်တော် က လူ တွေ ကို မေးကြည့် တော့ ၊
ဟို ပြောင်း ဒီ ပြောင်း ၊ ဘယ် ကို ပြောင်း ရ မှန်း မသိတဲ့ လူ တွေ များ ပါ တယ် ။
အခုရက်ပိုင်း ဒေါ်လာဈေး က လဲ ကျ ပ ဗျာ ၊ ရှေ့လျောက် လဲ ကျ ဦး မယ် ထင်ပါတယ်။
အင်တာနက် ထဲ က ဒေါ်လာ နဲ့ ယူရို ၊ ဒေါ်လာ နဲ့ ပေါင်စတာလင် ၊ ဒေါ်လာ နဲ့
အော်စတြေလျ ဒေါ်လာ ၊ ဒေါ်လာ နဲ့ ဂျပန် ယန်း အပြောင်း အလဲ ခန့် မှန်းချက် တွေ ဖတ်ရ
တာ ဒေါ်လာ ဘက် က အား မရှိပါဘူး ။ နေရာတိုင်း မှာ သူ က ဘဲ အားနည်း နေပါတယ်။
အခု အချိန် က ၂၀ဝ၈ အစ က ကဘာ့စီးပွားရေး ပျက်ခါနီး က လို ဖြစ်နေပါသတဲ့။
ဒေါ်လာ အား မရှိရင် ၊ ဒေါ်လာ နဲ့ ချိတ်ထား တဲ့ နိုင်ငံ အသေး တွေ ပါ လိုက် ထိဘို့
များ ပါ တယ် ၊ နိုင်ငံ တိုင်း က တော့ ကိုယ့် ပိုက် ဆံ ၊ ကိုယ် ကျား ကန် ဘို့ တော့
လုပ်ကြ မှာ ပါ ဘဲ ၊ မန်ဘာကြီး တွေ ပြော ကြ သလို ပါ ၊ တနေရာ မှာ တောင် ဘို့
ဖြစ်အောင် လုပ် လိုက် ရင် ၊ တနေရာ မှာ ချိုင့် ခွက် တခု ဖြစ် ရ တော့ မှာ ပါ။
ဒီနှစ် ထဲ ရေ နံ တို့ ရွှေ ဈေး တွေ က အတက် အကျ ကြမ်း ဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
အမေရိကန် က လူညံ့ မှ မဟုတ် တာ ဗျာ ၊ ကဘာ့ စီးပွားရေး မှာ သူနဲ့ ချိတ်ထား တာ
အများကြီး ပါ ။ ဘယ် အချိန် ဘယ် အချက် ကျ မှ ၁၉၉၇ မှာ အရှေ့တောင် အာရှ မှာ
ငွေးကြေး ပြသနာ ဖော် သလို ၊ ဘယ် နေရာ မှာ ဘယ် အချိန် ကျ ထ တွယ် မယ် မသိနိုင် ပါ။
မြန်မာ ငွေ တန်ဘိုး က ဒေါ်လာ နဲ့ ယှဉ် ရင် ဟုတ် နေ သလိုလို ရှိ ပေ မဲ့ ၊ မနက် ခင်း
ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ ပြီး ဈေး ထဲ သွားရင် တော့ ၊ ဘာ မှ လဲ ၊ မဟုတ် ရ ပါ ခင် ဗျာ။
ဆန်ဈေး ဆီဈေး ၊ ကြက်သွန်ဈေး ၊ အသား ငါး ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက် ဈေး တွေ က
ကိုင်း ဘယ် မှာ လဲ ၊ မြန်မာငွေ တန်ဘိုး တက် နေတယ် ဆို ၊ ဘဲ့ နဲ့ လဲ ဆိုပြီး ပြုံး စေ့ စေ့
နဲ့ ခပ် ထေ့ထေ့ လေး တွေ့ ရ မှာ ပါ။ ဆန်ဈေး တောင် နဲနဲ ထပ် တက်ချင် သလို ပါ။
ဘာဈေး တွေ ဘယ် လို ပြောင်း ပြောင်း ၊ စားရေးသောက်ရေး က အဓိက ပါ။
အခုတလော လူ ပြော များ နေ တာ က နိုင်ငံရေး ပါတီ တွေ က ကုန်ပဏီ ထောင်ကြ မဲ့
ကိတ်စ ပါ။ စာရေးဆရာကြီး လူထု ဦးစိန်ဝင်း က ပြတ်ပြတ် ပါ ဘဲ ၊ သူ ပြော တာ က
နိုင်ငံရေး ပါ တီ တွေ နဲ့ စီးပွားရေး ဆိုတာ က စိန် နဲ့ သံပုရာ လို ပါ ဘဲ တဲ့ ခင် ဗျ။
သူ တို့ ၂ ခု က သီးခြား စီထား ရင် ကိုယ် ပိုင် အစွမ်း တွေ ရှိ ကြ ပေ မဲ့
ဒီ ၂ ခု သွား ရော လိုက် လို့ က တော့ ပြင်း လိုက် တဲ့ အဆိပ် တခု ဖြစ် လာ ပါ တယ် တဲ့
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ကဘာ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင် တွေ ရဲ့ အဆို အမိန့် တွေ မှာ လဲ
နိုင်ငံရေး သမား က စီးပွားရေး လုပ်လို့ ထက် ၊ စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်းတွေ ဖြစ် လာ အောင်
စီမံခန့်ခွဲ တတ်ဘို့ ၊ ဖန်တီး ပေး တတ် ဘို့ က ပို ပြီး အရေး ပါ ပါ သတဲ့ ခင် ဗျ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လယ်သမားတွေ ချမ်းသာ ဘို့ လို ပါ တယ်။
သူတို့ စိုက် သလောက် ၊ သူ တို့ ပင်ပမ်း သလောက် အကျိုး ရ ဘို့ လို ပါ တယ်။
ကဘာ မှာ လဲ တခြား လူသုံးကုန်တွေ သာဈေး ကျ သွားတာ ၊ စားကုန် သောက် ကုန်တွေ က
တနေ့ တခြား ဈေး တွေ တက် လာ တာပါ။ အခု တရုပ် ပြည် မှာ အဲဒီ ၊ စားကုန်
ပြသနာ ကအရေးတကြီးဖြစ် လာ ပါ ဘီ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာ က တနေ့ တခြား လယ်သမား ဦးရေ နဲ လာ ပါ တယ်။
ရုပ် ရှင် ထဲ ၊ ဇတ်လမ်း ထဲ မှာ တောင် ၊ ( ငါ့ သား စာ ကို ကြိုးစား သင် နော်
အဖေ တို့ လို လယ် ထဲ မှာ ပင်ပင် ပမ်းပမ်း မဆင်းရဲ စေချင် လို့ ) ဆို တာတွေ ကြားရ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာ စာတတ် ပေတတ် လယ်သမားတွေ များ လာ ဘို့ လိုပါတယ်။
စာပေ ဗဟုသုတ ရှိပါ မှ ကိုယ့် လက်ထက် မှာ ကိုယ့် အဖေ လက် ထက် က ထက်
စပါး ပိုထွက်အောင် ၊ စက်ကရိယာ တွေ သုံးနိုင်အောင် ၊ ပင်ပင် ပမ်းပမ်း လုပ်ရ သလောက်
အကျိုးရှိအောင် ၊ ခေတ်မီ နည်းစနစ်တွေ သုံးပြီး အမေရိကန် က လယ်သမားလို စတိုင် နဲ့
ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိစေချင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ကို သေချာ ဝိုင်းကူ မဲ့ လူ ၊
ထဲ ထဲ ဝင် ဝင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မဲ့ သူ တွေ ၊ မရှိ သေး ပါဘူး ၊
နိုင်ငံ ကို တကယ်ချစ် ရင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ က မြန်မာ များ က အချိန် တိုတို နဲ့ သီးတဲ့
စပါးမျိုး တို့ ၊ ရေ မြုပ် တာ ခံ နိုင် တဲ့ စပါး မျိုး တို့ ၊ ယိုးဒယား ဆန်ထက် ပိုကောင်း တဲ့
စိုက် နည်း စနစ် တွေ ၊ အများ ပြည်သူ ၊ လယ်သမား လက် ထဲ ရောက် အောင်
ကူ ညီ စေချင်ပါတယ် ။
အခုတော့ ဂျာနယ် တစ်စောင် ထဲ ဖတ် လိုက် ရ တာ ၊ အံ့ဩော ပ ဗျာ ၊ အထွက် တိုး
အာဖရိကငါးခူ ကို မြန်မာ ပြည် မှာ မွေး ဘို့ လုပ် နေ ပါ သတဲ့ ဗျ ။ ဒီ အာဖရိကငါးခူ
ဆိုတာ တခြား နိုင်ငံတွေ က ကြောက်ကြလွန်းလို့ ပါခင်ဗျာ ။ ဒီ ငါးခူ လာရင် ရှိ သမျှ ငါး
မျိုး အကုန်ပြုတ် ပါ တယ် ၊ အင် မတန် အသားစား ကြမ်း ပါ တယ် ။ တွေ့ သမျှ ငါး သိမ်
ငါးမွှား အကုန်စား ပစ်ပါတယ် ။ ဒီ အာဖရိက ငါးခူ ရောက် လာ မှာ ကို နိုင်ငံတိုင်း က
ကိုယ့် နိုင်ငံတွင်း က ငါးမျိုးတွေ ပျောက်သွား မှာ ကြောက်ကြ လွန်းလို့ ပါ ခင် ဗျ။
အင်း မြန်မာဘောလုံး ကလပ် အသင်းတွေ ထဲ အာဖရိက ဘောသမားတွေ ခေါ် ကစားမိတာ
မ မှတ်သေး ဘူး နဲ့ တူ ပါ တယ် ၊ ဒီ ကပ်ကလီ တွေ က လဲ တွေ့ မရှောင် အကုန် စား တာ
ပါ ဘဲ တဲ့ ၊ ခင် ဗျ။
အခုခေတ် ၊ တခြား နိုင်ငံတွေ နဲ့ ယှဉ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ် တာ က ရေ ဆုံး မြေ ဆုံး မြင်တတ်
မှ ပါ ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ဆို တာ က လည်း ထင် သလောက် မလွယ်ဘူး ခင်ဗျ။
အကုန် လုံး က ကိုယ့် ကိုယ် ကျိုး ဦးစားပေး ကြည့် တဲ့ သူ တွေ ပါဘဲ။ ဟိုး ၁၉၉၅ လောက်
က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေ ခေတ်စား ခဲ့ ပါ တယ် ။ ရှိ တဲ့ လူ သူသူ ငါငါ ကုန်ပဏီ တွေ
ထောင် လိုက်ကြ ပြီး ပါမစ်တွေ လျောက် ၊ ကားတွေ သွင်း နဲ့ အတော် အလုပ်ဖြစ် ကြ ပါတယ်
တိုင်းပြည်အတွက် က တော့ ဘာ မှ ဖြစ် မလာ ပါ ဘူး ၊ အဲ ဒီ တုံး က ကားသွင်း တဲ့ လူ တွေ
ကားရောင်းစား ၊ မြေ ကွက် လျောက်ပြီး ပြန် ရောင်း စား ၊ ဆိုင် ရာ ပိုင် ရာ နဲ့ အလွမ်းသင့်
တဲ့ လူ တွေ ဘဲ အကျိုး ဖြစ်ကြတာပါ ၊ အခု အဲဒါ တွေ က ၁၅ နှစ် လောက် ကြာ လာ ပြီး
အခု အချိန် မှာ ၊ ဘာ တွေ အောင်မြင် သလဲ ဆို တော့ ၊ ဘာ တခု မှ မအောင် မြင်ပါဘူး။
အိမ် အမိုး ၊ သွပ် ပြား ထုတ် တဲ့ ကိုရီးယား ကုန်ပဏီ တွေ ဆိုရင် ၊ သွပ်ပြား လှိုင်း တွန့်
လှိမ့် တဲ့ စက်တမျိုး ဘဲ ပါ လာ တာပါ။ သွပ်ပြား ပလိမ်းရှိ(တ်) တွေ အခွေလိုက် နိုင်ငံခြား က
အကောက်ခွန်လွတ် သွင်းလာ ၊ ဒီ ကျ မှ လှိုင်းတွန့် လှိမ့် လိုက် ပြီး ၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း က
ဆိုင်တွေ ပြန်ရောင်းကြတာပါ။ သွပ်ပြား လုပ်ပြီးသားသွင်းလာ ရင် အကောက်ခွန် ပေး နေ
ရ ဦး မှာ ပါ။ အခုတော့ လူလည် လုပ်ပြီး ၊ သွပ်ပြား ကို အကောက်ခွန် လွတ် ၊ ဒီ နိုင်ငံ
ထဲ မှာ ဈေး လာ ရောင်း တာပါ။
တီဗွီ ထဲ ၊ လှအင်ဇလီတင့် နဲ့ ခနခန ကြော်ငြာ တဲ့ နို့ဆီ ကုန်ပဏီတွေ လဲ ဒီ လို ပါ ဘဲ
နိုင်ငံခြား က နို့ မှုန့် တွေ အကောက်ခွန် လွတ်သွင်းလာ ၊ ဒီ ကြ မှ ပြန် ချက် ပြီး ၊ ဘူး ထဲ
ထဲ့ ၊ ပြီးတော့ ပြည် တွင်း ဈေး ကွက် ထဲ ပြန် ရောင်း တာ ပါ ဘဲ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
မှု နာမည်ခံ ပြီး ၊ ဥပဒေ အရ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် တွေ ခံစား ကြ ပြီး ကိုယ့် အတွက်
ကိုယ် အမြတ်ထုတ် သွား ကြ တာ ဘဲ များ ပါ တယ်။
အဲဒီ ၁၉၉၅ လောက် တုံး က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု ဆိုပြီး လှိုင်သာယာ တို့ ရွှေပြည်သာ တို့
မင်္ဂလာဒုံတို့ မှာ စက်ရုံတွေ ထောင် လိုက် ကြတာ ၊ အကုန် လုံး က (ငရိတ် )တွေ ပါ ဘဲ
အား လုံး က ကုန်ကြမ်းတွေ ကို နိုင်ငံခြား က အကောက်ခွန် လွတ်ကင်းခွင့် ခံစားပြီး သွင်းလာ
ဝင်ငွေခွန် လဲ မဆောင်ကြ ရ ၊ နိုင်ငံခြား ပို့ကုန် လဲ မဟုတ်တော့ တိုင်းပြည် မှာ ငွေမာ
က လဲ မရ နိုင် ၊ ပြီးရင် ထုတ် သမျှ ကုန် တွေ ကို ကုလားဖန် ထိုးပြီး
ပြည်တွင်း မှာ ဘဲ အကုန်ပြန်ရောင်းပြီး ရ တဲ့ မြန်မာ ပိုက်ဆံ နဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်
ထဲ က ဒေါ်လာ ငွေမာ တွေ ကို ရ သမျှ ပြန်ဝယ်
ဒေါ်လာပိုက် အမြတ်ထုတ် ပြီး ၊ အိမ် ပြန် သွားကြတာ များ ပါ တယ်။
လန်ဒန်စီးကရက်တို့ ၊ တိုင်းဂါး ဘီယာ တို့လဲ အဆိုးဆုံးပေါ့ ဗျာ ၊ အဲ လို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်
နှံ မှု ဆိုတာတွေ က ဥပဒေ ကို လက်တလုံးခြား လုပ်ပြီး ၊ ရ သမျှ ကင်းလွတ်ခွင့် တွေ ၊
ကားသွင်းခွင့် တွေ ၊ မြေ ကွက် ရ တာတွေ ၊ အခွန် အခ မဆောင်ဘဲ နေ လို့ ရ တာ တွေ
အကုန် ခံစား ၊ တဘက်လှည့် နဲ့ ပြည်တွင်း ထဲတင် ဈေး လာရောင်း သွားကြ
တွေ များ ပါ တယ် ၊ တိုင်း ပြည် က တော့ မိ အေး ၃ ခါ နာ သ ပေါ့ ဗျာ ။
အခု အချိန် အထိ ၊ ဘာ အကျိုး မှ မရ ခဲ့ ပါဘူး ၊ ပြန် စဉ်းစား ကြည့် ကြ ပါ ခင် ဗျာ ။
ကျွန်တော် မန်းတလေး ရောက်တုံး ၊ မြဘုရင် နို့ဆီလုပ်ငန်း ကို တွေ့ ခဲ့ ပါတယ်။
နဲ တဲ့ ဆိုင်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး ၊ အ ကြီးကြီး ပါ။ ပိုင်ရှင် က ဦးဝင်းမောင် တဲ့ ခင်ဗျ ၊
အရင် က မူလတန်း ကျောင်းဆရာပါ။ ကိုယ် ပိုင် တနိုင် လေး ၊ နို့ ဆီချက်ရင်း ကြီးပွား လာ
တာပါ ။ သူ့ အကြောင်း ကြား ရ တာ က စိတ် ဝင်စား စရာ ပါ ။
ဒီ လူ က နို့ ဆီ ချက် ရင်း ၊ ရ တဲ့ အမြတ် နဲ့ ၊ တော ကို ဆင်း ပြီး ၊ တော က လူ တွေ ကို
နို့စားနွား ဝယ်ပေး ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အဲဒီ နွား က ထွက် တဲ့ နို့ ကို သူ က ဘဲ ပြန်ဝယ်
ပြီး နို့ ဆီ ချက် ပါ သတဲ့ ဗျ ။ အခု တော တွေ မှာ သူ ဝယ် ပေးထား တဲ့ နွားတွေ အများ
ကြီး ဘဲ တဲ့ ခင် ဗျ ။ နွား နို့ လိုက် သိမ်း တာ တောင် ၊ ဟီးနိုး ဘောက်ဆာ ကား ကြီးတွေ နဲ့
လိုက် သိမ်း ရ ပါ သတဲ့ ဗျ။ အခု နို့ ဆီ တင် မက ပါဘူး ၊ နို့ မှုန့် ပါ လုပ် နေ တယ် ကြား
ရ ပါ တယ် ။ သူ့ စီးပွားရေး က လဲ အခု ဆို အတော် အ ကြီးကြီး ဖြစ် နေ ပါ ဘီ။
ဒါ မျိုး က ၊ ကျွန်တော် အထက် က ရေး ပြထား တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တွေ နဲ့ နှိုင်းစာ ရင်
အများကြီး ပို အကျိုး ရှိ ပါ တယ် ။ သူ လဲ အကျိုးဖြစ် ၊ တော က လူ တွေ လဲ အများကြီး
အကျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ နိုင် ငံ မှာ ၊ လူ အများစု အတွက် စီးပွားရေး
အခွင့် အလမ်း ဖန်တီး နိုင် တဲ့ လူ တွေ လို ပါ တယ် ။ အထူး သဖြင့် လူ အများစု ဖြစ် တဲ့
တော နေ လယ် သမား များ အတွက်ပါ ။ သူ တို့ ချမ်းသာ ကြ ရင် ၊ ကျွန်တော် တို့
မြန်မာပြည် တကယ် ချမ်းသာ ပါ ဘီ။
အခု စစ်အစိုးရ က နိုင်ငံခြား နဲ့ စီးပွားထူထောင် လိုက် ရင် အမြဲတမ်း အောက်ကျ
နောက်ကျ ပါ ဘဲ ၊ ဘာ ဘဲ လုပ်လုပ် တိုင်းပြည် က ခံ လိုက် ရ တာ ဘာ ဘဲ ၊
မြတ်တယ် ဆို တာ တခ့ မှ မရှိ ပါဘူး ။ တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံရေး လုပ် မဲ့ သူ တွေ
စဉ်း စား နိုင် အောင် ပါ ခင်ဗျာ ။
နောက် အစိုးရ လက်ထက် ကျ နိုင်ငံစီးပွားရေး ဘယ်လို ဖြစ်မယ် မသိနိုင် သေး ပါခင်ဗျာ။
တခါ တော့ နေရာ ကျ ပြီ ဆို ပြီး ၊ ကောက်စား လိုက် ပြီး ၊ ဘိုက် ကလေး ပွတ် နေ မိတာ
ပြန် ကြည့် လိုက်တော့ မှ ၊ ကိုယ့် အမြီး ၊ ကိုယ် ပြန် ဖြတ် ၊ စား လိုက် မိ တဲ့ ကိန်း ၊
မ ဖြစ် ပ ရ စေနဲ့ ဗျာ ။
မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား များ ၊ အား လုံး ၊ ဝ ဝ လင် လင် ၊ ချမ်း ချမ်း သာ သာ
လှူ နိုင် တန်း နိုင် ၊ ဘ ဝ မှာ အဆင် တပြေ ကြောင့် ကြ မှု ၊ ကင်း ဝေး နိုင် ကြ ပါစေ ဗျား။
မြန်မာကျူ့ ပစ်ရီပို့ တာ
5 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.doc
5 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
5108K View Download
2706K View Download
berlarus in the mirror.pdf
782K View Download
Open Letter to Senior General Than Shwe.docx
992K View Download
5 Jan 2011 Yeyintnge's Diary
အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်ရင်း အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် )
အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်ရင်း အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့
(ဘာသာပြန်သူ - ဇာဝါရီ (မယ်ရီလန်း)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလအတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကြောင့် ၁၃ နှစ်ကြာ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မှပေးစာ (Letters from Burma) ဆောင်းပါးအခန်းကဏ္ဍကို မိုင်နီချိ (Mainichi) ဂျပန်သတင်းစာ ပေးစာကဏ္ဍမှာ လစဉ်ပုံမှန် ပြန်လည်ရေးပို့သွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီဇင်ဘာလက ရေးပို့ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးကို ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ မိုင်နီချိ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိုးမခ စာချစ်သူများအတွက် ဆီလျော်သလို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။
The beginning of the year isatime for renewal, reinvigoration, resolutions and remembrance of things past.
နှစ်သစ်ဆိုတာ ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ ခွန်အားသစ်တွေ ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် (သံန္နိဌာန်) တွေချခြင်း နဲ့ အတိတ်ကာလ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်လည်တမ်းတကြတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
I look back on 2010 and find that parts of the year were so little memorable as to have disappeared wholly into the lost wastes of time. How did I spend the first day of 2010? I cannot remember.
ကျမ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နှစ်ကာလကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှအကျိုးမရှိ အလဟဿ ကုန်ဆုံးသွားတာကလွဲလို့ မမေ့နိုင်စရာ လွမ်းစရာဆို အနည်းငယ်လောက်ပဲ တွေ့ရတယ်။ ၂၀၁၀ ရဲ့  ပထမနေ့ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျမ မမှတ်မိတော့ဘူး။
I can say, however, that it could not have been comfortable. Renovations to my house had been started in December 2009 and stoppedafew weeks later by order of the municipal authorities.
ဒါပေမဲ့ ကျမပြောနိုင်တာကတော့ အတော်လေး စိတ်သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ နှစ်တနှစ် ဖြစ်တယ်။ ကျမရဲ့  နေအိမ်ကို ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာမှာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာ မြို့ တော်စည်ပင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်က ရပ်ဆိုင်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့လို့ ရပ်နားခဲ့ရတယ်။
While my lawyers worked to get the order reversed, I spent several months living in the midst of cardboard boxes, thick woven blankets wrapped around unidentifiable objects, assorted suitcases and leaning towers of books.
ကျမရဲ့  ရှေ့ နေတွေ တားမြစ်အမိန့်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာ ကျမမှာတော့ စက္ကူကတ်ထူပြားတွေ၊ ဘာတွေမှန်မသိတဲ့ စောင်ကြမ်းထူတွေနဲ့ ပတ်အုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ခရီးဆောင်အိတ်မျိုးစုံတွေ နဲ့ ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ စာအုပ်စင်တွေကြားထဲမှာ လပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။
Looking up from my bed, which was wedged betweenahigh bookshelf, odd tables andanumber of lumpy bundles, I hadagood view ofapeeling chunk of ceiling that afforded me many moments of contemplation on the nature of decrepitude and decay.
စာအုပ်စင်ကြီးတစင်၊ အရွယ်မတူ စားပွဲခုံတွေ နဲ့ ဖရိုဖရဲ အထုပ်အပိုးတွေကြားမှာ ရှိနေတဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကနေ ကြည့်လိုက်ရင် အချပ်လိုက် အလိပ်လိုက်ကွာကျနေတဲ့ မျက်နှာကြက်ကို ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။ အဲဒါကိုမြင်တွေ့ပြီး ကျမအနေနဲ့ အိုမင်းပျက်ဆီးခြင်း နဲ့ ယိုယွင်းပျက်ဆီးခြင်း တရားသဘောကို ဆင်ခြင်ကြည့်ရှု နိုင်ခဲ့တယ်။
While the weather was cool, the jam-packed room seemed cozy, and the urban jungle camp-style of existence could be seen as something of an adventure. As the weather got hotter and hotter, however, the romance wore off, particularly as the scaffolding that had been erected against the outside walls was in suchaposition that the windows of the bedroom could not be opened and large parts of the night were passed in sleepless swelter. I did not feel in the best of health.
အေးမြတဲ့ ရာသီချိန်မှာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခန်းက နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိသလို ဆန်းသစ်တဲ့ မြို့ ပြတောစခန်းလေးတခုလို ဖြစ်နေပေမယ့် ရာသီဥတု တဖြည်းဖြည်း ပူပြင်းလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ကူးယဉ်ကြည်နူးစရာလေးတွေလည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် အခန်းအပြင်ဖက်ကနေ ပြတင်းပေါက်တွေကို ကန့်ပိတ်ထားတဲ့ ငြမ်းတွေကြောင့် အခန်းပြတင်းပေါက်တွေကို ဖွင့်လို့မရတာကြောင့် ကျမအဖို့ ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ အိပ်မရတဲ့ညပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ကျမအဖို့ အတော်လေး မကျန်းမမာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
The first quarter of 2010 was not justaperiod of physical discomfort, it was also one of intense mental activity. My lawyers would visit me on occasion to discuss the appeal that we had lodged against the sentence that had been meted out to me at the Insein Jail court the previous year. I found the whole legal process fascinating and learnt much from my highly experienced and able lawyers.
၂၀၁၀ အစောပိုင်း လေးလကတော့ အတော်လေး စိတ်ရောကိုယ်ပါ သက်တောင့်သက်သာ မရှိ၊ ပင်ပမ်းဆင်းရဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလ ဖြစ်တယ်။ ကျမရဲ့  ရှေ့ နေများ အခါအခွင့်သင့်သလို ကျမကို လာရောက်တွေ့ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တရားရုံးက ကျမအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကို ကန့်ကွက်၊ အယူခံတင် လျှောက်လွှဲလုပ်ဆောင်နေမှုတွေကို ဆွေးနွေးရှင်းလင်း ပြောဆိုကြတယ်။ အတွေ့အကြုံများ ဝါရင့်သမာရင့်၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝကြတဲ့ ကျမရှေ့ နေများဆီမှ တရားဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လေ့လာသိရှိခဲ့တယ်။
I felt immense pride in them and in the Legal Committee of the National League for Democracy (NLD) that had been working hard since 1995 to uphold the rule of law and to defend the rights of prisoners of conscience in our country. As one of the lawyers, U Nyan Win, wasamember of the Executive Committee of the NLD, I also learnt much of what was happening in the political world outside my house and was able to participate to some extent in the decision making process of the party.
၁၉၉၅ ခုနှစ်ကတည်းက တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့  ရပိုင်ခွင့်များအတွက် မနားမနေ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ ရှေ့ နေကြီးများ နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီတို့ရဲ့  လုပ်ဆောင်နေမှုတွေကို ကျမအနေနဲ့ အထူးဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်။ ရှေ့ နေကြီးများအနက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း မှ တဆင့် ပြင်ပနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ အဖြစ်အပျက် အပြောင်းအလဲများ လေ့လာနိုင်ခဲ့သလို၊ (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီရဲ့  လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်လည်း အထိုက်အလျောက် ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
This, inayear crucial to the political scene in Burma, posed intellectual challenges which, for me, were of far greater importance than health considerations.
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ နှစ်ကာလဖြစ်နေတာကြောင့် ကျမအဖို့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထက် များစွာပိုအရေးကြီးတဲ့ အသိဥာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စိမ်ခေါ်မှုများလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
Around the time of the Burmese New Year that falls in mid-April, the court decreed that the renovations to my house could be continued. Overnight, what had been an enclosure cut off from the sounds and movements of the world outside becameaplace of constant noise and action as workmen swarmed all over the place.
ဧပြီလလယ် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးချိန်ကာလမှာ တရားရုံးတော်က ကျမရဲ့  အိမ်ကို ဆက်လက်ပြင်ဆင်ဖို့ ခွင့်ပြု အမိန့်ချလိုက်တယ်။ နောက်တရက်မှာပဲ ပြင်ပကမ္ဘာ အသံလှုပ်ရှားမှုတွေကင်းကွာပြီး တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေရာဟာ ရုတ်ခြည်း ဆူဆူညံညံ ဖြစ်လာပြီး အလုပ်သမားတွေ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးလာခဲ့တယ်။
There was so much to be done. A major project was repairs to the roof. For some years I had spent the monsoon months moving my bed, bowls, basins and buckets around my bedroom like pieces in an intricate game of chess, trying to catch the leaks and to prevent the mattress (and myself, if I happened to be on it) from getting soaked. Now that the roof would be made sound. I could look forward to the next rains with equanimity. In Burmese,asound roof isametaphor for security,areflection of the notion that if all was well at the very top, all would be well throughout an edifice.
ပြင်စရာလုပ်စရာတွေ တပုံတပင်ကြီး ကျန်ရှိပါသေးတယ်။ အဓိက ပြင်ရမှာကတော့ အိမ်ခေါင်မိုး ဖြစ်တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိုးတွင်းကာလ မိုးရွာချိန်ဆို ခေါင်မိုးက ယိုကျလာတဲ့ မိုးရေမစိုအောင် အိပ်ယာကို ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ ၊ ပန်းကန်ဇလုံတွေ၊ ရေပုံးတွေနဲ့ အခန်းပြည့် ရေခံထားလိုက်ရတာ စစ်တုရင်ကစားကွက် ချထားသလို ဖြစ်နေတော့တယ်။ အခုတော့ အမိုးလုံဖို့ လုပ်ရပါမယ်။ ဒါမှ နောက်တကြိမ် မိုးရွာလာရင် စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ နေနိုင်လိမ့်မယ်။ မြန်မာစကားမှာတော့ ခေါင်လုံမှ (စိတ်ချ)လုံခြုံတယ်လို့ ပြောဆိုယုံကြည်ကြတယ်။ ဆိုလိုရင်က အထက်ခေါင်းထိပ်က လုံခြုံစိတ်ချရမှ အောက်ခြေပိုင်းတလျှောက် (အဆောက်အဦးတခုလုံး) ကောင်းမွန်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။
The repairs and renovations meant there would be greater physical convenience and comfort in the future. But much more important than the material considerations were the human contacts that were made possible. Every day for about five months (the work on the house went on from April to September withabreak of three weeks in-between), I was able to acquaint myself with the lives and concerns of our workmen, to acquireabetter understanding of the difficulties with which the labor force of our country had to cope and to getaclearer idea of their hopes and aspirations.
ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင် မွမ်းမံတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတာ ရှေ့ လာမယ့်အနာဂတ်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်ပြေ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေထက် ပိုအရေးကြီးတာက ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုထက် လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုဖြစ်တယ်။ အိမ်ပြင်နေတဲ့ အချိန်ကာလ ငါးလအတွင်း (သုံးပတ်နားချိန်ကလွဲလို့ ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) နေ့စဉ်ဆိုသလို အလုပ်သမား၊ လက်သမားတွေနဲ့ တွေ့ထိစကားပြောခွင့်ရပြီး ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့  အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေရဲ့  ဘဝအခက်အခဲ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကြားသိ နားလည်းခဲ့ရတယ်။
Another consequence of the renovation project was frequent discussions with the Special Branch and other forces responsible for the security of the premises. The bringing in of men and materials had to be negotiated on an almost daily basis, and we found that obstacles could be smoothed out with reasoning and flexibility on both sides.
အိမ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ တခြားရရှိတဲ့ အကျိုးရလာဒ်ကတော့ အထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ နဲ့ အိမ်တဝိုက် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ မကြာခဏ ဆွေးနွေးစကား ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နေ့စဉ်ဆိုသလို အလုပ်သမားတွေ၊ အလုပ်ပစ္စည်းတွေ အသွင်းအထုတ် ရယူဖို့ကိစ္စတွေအတွက် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုပဲ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေပြေလည်လည် အကျိုးအကြောင်း၊ အတိုးအလျှော့လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းကျော်လွှာနိုင်တာကို ကျမတို့ တွေ့ရှိခဲ့တယ်။
2010 wasayear that brought many improvements to my house, but what it brought to our country, which is the home of all our people, isamuch more serious tale, to be told another time.
၂၀၁၀ မှာ ကျမနေထိုင်တဲ့အိမ်ကတော့ အတော်လေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်အိမ်ကြီးအတွက် ဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာက အလေးအနက် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ နောက်တကြိမ်မှ ပြောပါမယ်။
I would like to end this, the first article I have written since my release, by expressing my deep appreciation of the support and friendship the Mainichi Shimbun has given me over two decades and by sharing with its readership an extract fromapoem that hadaspecial significance for my late husband and that I cherish for its abiding wisdom:
ကျမလွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် (ဆယ်စုနှစ် နှစ်စု) ကျော် ထောက်ခံပံ့ပိုးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ မိုင်နီချီ ရှင်ဘန် သတင်းစာကြီးကို လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင် ဒီဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး စာဖတ်သူများကို ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ကျမခင်ပွန်းသည်အတွက် အထူးလေးနက် အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့ပြီး ကျမကိုယ်တိုင်လည်း တမြတ်တနိုး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသိဥာဏ် ဆင်ခြင်တရားပေးတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ရဲ့  ကောက်နုတ်ချက်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
...yesterday is butadream,
- from The Salutation to the Dawn based onaVedic Hymn. (By Aung San Suu Kyi)
မနေ့ကဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အိပ်မက်တခု
မနက်ဖြန်ဆိုတာ အတွေးအမြင် တခုသက်သက်
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မှာ ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ကြရမယ်
မနေ့တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စရာအိပ်မက်တွေအဖြစ် ဖန်တီးကြပြီး
မနက်ဖြန်တိုင်းကို မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ပဲ ထားလိုက်ကြ
ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့ကိုတော့ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း ရှင်သန်ကြရမယ်။
-- အေဒီ ၆၀၀-၁၂၀၀ ရာစုအတွင်း ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယကဗျာစာဆိုကြီး ကာလီဒါစ (Kālidāsa [600 - 1200 AD) ရဲ့  အာရုဏ်ဦးကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်း
(သရုပ်ဖော်ပန်းချီ - သန်းဋ္ဌေးမောင်)
2011 Jan 03 Use More Landmines in Karen State
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ပေါ်၌
အကြမ်းမဖက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ ဦးဆောင်၍ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆီမီး ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ (ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်သံ၊ သတင်း)
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ (၆၃)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အကြမ်းမဖက် အမျိူးသားလှုပ်ရှားသူများမှ ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုများ၊ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ စုပေါင်း၍ မြန်မာပြည်တွင်း ယုံကြည်ချက်ကြောင် အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော်.. လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဖယာင်းတိုင်(၂၂၀၃)တိုင်အား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆီးမီးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်၍ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သခဲ့ကြပါသည်..။ ထိုနောက် ရွှေတိဂုံ အောင်မြေတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ အကျဉ်းထောင်များ၌ အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းလှုပ်ရှားသည့် ဆီးမီးပူဇော်ပွဲအား အကြမ်းမဖက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ ဦးဆောင်ပြီး NLD ပါတီဝင်များ၊ အကျဉ်းကျ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များနှင့် အင်္ဂါဝတ်ပြုဆုတောင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဝင်များ စုစုပေါင်း ၆၀ဦးခန့်မှ တက်ရောက် ဆုတောင်း ဆီးမီးပူဇော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်များမှ တစုံတရာ တားဆီး နှောက်ယှက်မှု မပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ အဝေးမှ ငြိမ်သက်စွာဖြင့် လိုက်လံ မှတ်တမ်းယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့ဘက်မှလဲ ဆုတောင်းပွဲပြီးသည့်နောက် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးပြီး အဖွဲ့ချုပ်မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း အကြမ်းမဖက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူ ကိုလူမော်လတ်မှ ပြောဆိုသွားပါတယ်..။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ။
နေ့စွဲ။ ။ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ။
ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ဖြစ်စဉ်များကို ခြုံငုံသုံးသပ်လျှင် အတိမ်းအစောင်း မခံနိုင်သော ဖြစ်စဉ်များနှင့် အရေးအကြီးဆုံးသော အချိန်ကာလတခုကို ဖြတ်သန်းလျှက် ရှိနေပါသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မူ့သည် နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်နီးပါး ကြာခဲ့ပြီး ထိုကာလ တလျောက် စစ်ခေါင်းဆာင်များသည် အသီးသီး လက်ဆင့်ကမ်း ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံ သည်လည်း လွန်ခဲ့ပြီးသော အနှစ် ၅၀ကျော် ကာလက အတော်အသင့် ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံ အဆင့်မှ လူမှု့ရေး ကျမ္မာရေး မှစ၍ အစစအရာရာတွင် ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ အဆင့်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည်။
စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ဆိုးကြီး အောက်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး စီမံခံခွဲမှု့များ ကျွမ်းကျင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက်မှု၊ အာဏာ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှု စသည့် အဖြစ်ဆိုးများ များစွာရှိခဲ့သည်။ ထိုချိုးဖေါက်ခံရမှုများ၏ တရားခံသည် လက်ရှိ စစ်ခေါင်းဆာင်များ အပေါ် ပုံချလျှင်လည်း တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်နီးပါး စံနစ်ဆိုး၏ ဒဏ်ကြောင့် စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် စံနစ်ဆိးု၏သားကောင် ဘ၀များ အဖြစ် ဘ၀နိဂုံးများ မကောင်းခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ အချို့ စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် မိသားစုများလည်း ယနေ့ထိ အကျဉ်းကျခံ နေရဆဲ နှင့် နောင်တွင်လဲ ထိုအဖြစ်မျိုး ကိုဆက်လက် တွေ့ကြုံရမည်မှာ မလွဲသေခြာလျှက် ရှိပါသည်၊ သို့ပါ၍ စစ်ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် အာဏာ ပါဝါ ငွေကြေး လက်နက် ပြီးပြည့်စုံပါလျှက် နောက်ကျောမလုံ သော အခြေအနေနှင့် လုံခြုံမှု့မရှိသည့် အနာဂါတ်ဘ၀များ ဖြင့်ရှင်သန်နေရသည်။
ယနေ့ခေတ်အခါမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ မှစ၍ အောက်ခြေလူတန်းစား ဘ၀အဆုံး၊ သားစဉ်မြေးဆက်တို့်၏ အနာဂါတ်များ လုံခြုံ အေးချမ်းသာယာရေး အတွက် အာမခံချက် ပေးနိုင်သော အရာမှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ် မှတပါး အခြားသောအရာ မရှိပါ။ သို့ပါသောကြောင့် တပ်မတော်၏ သားစဉ်မြေးဆက် လုံခြုံရေးနှင့် သမိုင်းကြောင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေရေး အတွက် နှစ်ငါးဆယ်နီးပါး ကွယ်ပျောက်နေသည့် တပ်မတော်သားကောင်းတို့၏ အစွမ်းအစပြမှု့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အချိန်အခါကောင်းကို အမိအရ အသုံးချရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ဒီမိုကရေစီ၏ ရပိုင်ခွင့်များဖြစ်သော အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားမျှတသော တရားစီရင်ရေး တို့ကို အကာကွယ်ပြု ခံစားနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
တဖက်မှလည်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သန့်စင်မွန်မြတ်သော စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည့် သင်ပုန်းချေရေး တပ်မတော်မပြိုကွဲရေး တပ်မတော် အပါအ၀င် ပြည်သူအားလုံး၏ လုံခြုံရေးနှင့် တရားမျှတမှု့ ရရှိရေးတို့အတွက် ကြိုးပန်းမှု့အပေါ် တိုင်းရင်သားကိုယ်စါးလှယ်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ပြည်သူတရပ်လုံးမှ အလေးထား အသိအမှတ်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူကြားတွင် အပြန်အလှန်နားလည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပေါင်းကူးအဖြစ် အကောင်းဆုံး ဖေါ်ဆောင်မှု့ ပေးနိုင်မည့် တဦးတည်းသော ခေါင်းဆောင်း လည်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များမှ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာပြည်သူလူထု တရပ်လုံး၏ ဘ၀လုံခြုံရေး အနာဂါတ်ပြည်ထောင်စုကြီး သာယာရေးတို့ကို တပ်မတော်မှကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ထိုအပြောင်း အလဲပေါ်ပေါက်လာစေရန် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၏ အထောက်အကူများ အထူးပင်လိုအပ်ပါသည်။
ယ္ခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာသောကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထု နှင့်တကွ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အာလုံး ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တပ်မတော်ဆောင်များတို့ အမိမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး တိုးတက်သာယာဝပြောရေး တို့အတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါက မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရဟံရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်း နှင့်တကွ တကမ္ဘာ့လုံး ချီးကျူးဂုဏ်ပြု ကြမည်မှာ ဧကန်မုချဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဤအပြောင်းအလွဲဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက် ယနေ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဦးဆောင်ပြီှး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အလျှင်မြန်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပါရန် သဘောထားအမှန်ဖြင့် ရိုးသားစွာ အကြံပြု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မိတ္တူ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ဦးညွန့်လှ (1-306-242-4536)၊ nyunt1947@gmail.com
ဦးမြသွင်(1-778-899-8586) ၊ thwinmya@yahoo.ca
Attachment(s) from Mya Thwin
ကြည့်မှန်တချပ်အောက်က အလင်းစက်များ(Aung Moe Win)
Berlarus in the Mirror
ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့) မှာ ကျင်းပခဲ့ြေ...
အရင် နာမည် မထွက်ဘူးသေး တဲ့ လူ က ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချု...
အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်ရင်း အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ ( ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ကျော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ေ...